भौतिक दूरी, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर संसद् चलाउन सकिने विज्ञहरूको सुझाव- समाचार - कान्तिपुर समाचार
काठमाडौँ — कोरोना भाइरस (कोभिड- १९)को संक्रमण जारी रहेकै अवस्थामा कसरी संसद् सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा संघीय संसद सचिवालयले विज्ञहरूसँग छलफल गरेको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले भौतिक दूरी कायम गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर संसद् बैठक सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिएका छन् । उनीहरूले संसद् सञ्चालनको विधिबारे सबै राजनीतिक दलहरूबीच एकमत हुनुपर्ने धारणा राख्दै विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।
संघीय संसद् सचिवालयले बुधबार स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरेर संसद् चलाउने उपायको खोजी गरेको हो । सचिवालयले सरुवारोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन र जनप्रशासन विज्ञ एवं पूर्वसांसद जनकराज जोशीसँग छलफल गरेको थियो ।
छलफलमा सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. पुनले सतर्क भएर स्वास्थ्य मापदण्ड पुरा गरी संसद्को बैठक सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिए । भौतिक दूरी र स्वास्थ्य मापदण्ड इमान्दारीसाथ पालना गर्न पनि उनले आग्रह गरेका थिए ।
जोशीले सदनको बैठकमा थोरै सांसदको उपस्थिति गरेर चलाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका थिए । संसद् बैठकमा भौतिक दूरी कायम गर्ने, मास्क लगाउने, हात धुने व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्नसके बैठक चलाउँदा कुनै समस्या नहुने बताए ।
भौतिक दुरीको पालना हुन नसक्ने तथा लामो छलफल हुने अवस्थामा हाइब्रिड तरिकाले संसद् चलाउन सकिने सुझाव पनि जोशीको थियो । अहिलेको नियमावलिमा हाइब्रिड संसद्‌बारे केही व्यवस्था नभएकोले सभामुखले एक संकल्प प्रस्ताव ल्याएर तत्काल निकाश दिन सक्ने उनको सुझाव थियो ।
छलफलमा विज्ञहरूले संसद् चलाउने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच मतैक्यता हुन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् ।
संसद्‌को हिउँदे अधिवेशनको तयारी भइरहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार पुस १७ गतेभित्र संसद्‌को हिउँदे अधिवेशन बोलाइसक्नुपर्छ । सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अधिवेशन बोलाउने तयारी गरिरहेको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले जानकारी दिएकी छन् ।
प्रकाशित : मंसिर २४, २०७७ १८:५७
पारिश्रमिक बढाउने सहमतिपछि अरुण तेस्रोको काम सुरु
मंसिर २४, २०७७ दीपेन्द्र शाक्य
संखुवासभा — पारिश्रमिक बढाउने सहमति निर्माण कम्पनीले गरेपछि संखुवासभामा निर्माणधीन ९ सय मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको काम बुधबारबाट सुचारु भएको छ ।
त्यहाँ कार्यरत २ हजार नेपाली र भारतीय मजदुरहरुको तलबभत्ता बढाउने सहमति भएपछि काम सुरु भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीवनप्रसाद आचार्यले बताए । तलब बढाउनु पर्ने माग राख्दै मजदुरहरुले सोमबारदेखि आन्दोलन गरेका थिए । स्थानीय जनप्रतिनिधि, प्रशासन र मजदुरहरुबीच बसेको छलफलले जिल्ल्लामा चलेको दरअनुसार तलबभत्ता दिने, ८ घण्टामाथि काम गर्नेलाई १ दशमलव ५ प्रतिशतले ओभरटाइम दिने, जुनसुकै कामदारलाई काम बिगारेको खण्डमा स्पष्टिकरण सोध्ने र सफाइको एकपटक मौका दिएर मात्रै कामबाट निकाल्ने र महिना मरेपछि तलबभत्ता बैंक खातामा जम्मा गर्ने लगायत बुँदाहरुमा समति भएको हो ।
जिल्ला दररेट अनुसार, दक्ष मजदुरले ९ सय ४० रुपैयाँ, अर्धदक्षले ७ सय ७५ रुपैयाँ र ज्यामीले ६ सय ५० रुपैयाँ पाउनु पर्ने र ८ घण्टाको ड्युटी भए पनि १२ घण्टासम्म दिन र रातमा काम गरिरहेको हुँदा कम्पनीले ओभरटाइमको पैसा दिनुपर्ने, मजदुरहरुलाई हरेक महिनाको १५ तारिखभित्र तलबभत्ता बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्ने, साप्ताहिक, पाक्षिक र मासिक रुपमा पाउने बिदा दिनुपर्ने, बिरामी बिदा दिनुपर्ने र बिना कारण मजदुरहलाई कामबाट निकाल्ने काम बन्द गर्नुपर्ने लगायतका ९ बुँदे माग राखेर काम अवरुद्ध पारेका थिए ।
संखुवासभाको मकालु गाउँपालिका-५ फ्याक्सिन्दा दोभानमा अरुण तेस्रो बाँधस्थल निर्माणधीन रहेको छ । चिचिला गाउँपालिका–२ दिदिङ्ग पुखुवामा पावर हाउस निर्माण भइरहेको छ ।
प्रकाशित : मंसिर २४, २०७७ १८:३२